Iindaba -Uhambo olutsha lokudibana kwemizi-mveliso, ukuxhawula izandla kunye nokwenza isahluko esitsha
I-Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co, Ltd., eseke iindawo eziphakamileyo ngalo lonke ixesha, ingenise umzuzu obalulekileyo wembali. Nge-Epreli 12, 2021, i-Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. kunye ne-Shenzhen Dental Craftsman's Home Technology Co, Ltd. ngokusesikweni sayina isivumelwano sobambiswano. Kuxelwe ukuba la maqela mabini afikelele kwisivumelwano sentsebenziswano ngokudityaniswa kwecandelo, ukuqeqeshwa kwezakhono kunye nokuphuculwa kweengcali zamazinyo, ukutshintshiselana ngobugcisa kunye nophuhliso kumzi mveliso.
Kule ntsebenziswano yobuchule, iingxoxo ezinzulu kunye neenkcukacha zokuphumeza zenziwe kwimveliso yazo zonke iiceramic zirconium blocks, amaziko okulungisa amazinyo, uqeqesho lobuchwephesha kunye nokufunda, kunye neemveliso zamazinyo ezenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Ukufumana kwakhona kuphucule unxibelelwano olunzulu kuwo onke amakhonkco, kukhawulezisa ixesha elifanelekileyo lokufumana ulwazi ngemizi-mveliso kunye neemfuno zabathengi, kunye nokwenza iimveliso zihambelane ngakumbi neemfuno zomsebenzisi.
U-Bi Wenjuan, usekela mphathi jikelele we-Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co, Ltd. wazisa: Ukudityaniswa nkqo kweshishini ngu-Yurucheng kunye neKhaya likaGqirha wamazinyo, ukuthelekisa izinto zamazinyo, ulwabiwo olufanelekileyo lwezixhobo, ubunzulu beshishini, kunye ukukhuthaza ukhuphiswano kushishino Yonke imikhosi inefuthe elihle. Kubaluleke ngokungaqhelekanga kwindibaniselwano kunye nokungena kwamashishini asezantsi naphantsi komqolo womlomo njengokuvelisa izinto zamazinyo, indawo yokulungisa amazinyo, iiklinikhi zamazinyo, njl njl. iimfuno zabathengi bokugqibela, izithintelo kwishishini, kunye nobuchule kushishino lotshintshiselwano. Akukho namnye, ukulungiselela ngcono abasebenzisi bokugqibela ngcono.
U-Liu Jianjun, uMongameli we-Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. uthe: Ngokuphuculwa kolwazi ngomlomo kunye notyekelo lwemigaqo-nkqubo yesizwe yokuqhuba oogqirha babucala, ishishini lamazinyo lingenise ithuba elihle lophuhliso. Phantsi kwale meko sikuyo ngoku ubhubhane, "ingozi" kunye "nethuba" zihlala kunye. Ngelixa sibona ifuthe lobhubhane kwishishini lomlomo, kufuneka sicinge nzulu malunga nophuhliso lwexesha elizayo lweshishini lomlomo, sigxile koku kubekiwe kwaye sibeke ikamva. “Okwangoku, ishishini lamazinyo lisungule ishishini elipheleleyo, elifuna ukuba singene kwinqanaba lokhuphiswano olusempilweni kunye nokudityaniswa ngelixa liphuhliswa ngesantya esiphezulu. Kuphela kulawulo olumiselweyo apho kuya kubakho ixesha elide kunye nesandi sophuhliso lweshishini.